Xuuxuu irratti ilaalchi kristaanaa maalii dhaa? Xuuxuun cubbuu dhaa?
Kitaabni qulqulluun xuuxuu kallattiidhaan raawwatee hin ibsuu. Kan ta’es ta’ee qajeelfamni jiru, amansisaati waa’ee xuuxuuf ooluu kan danda’an. Tokkooffaan, Kitaabni qulqulluun nu abooma, qaamni keenya waan kam irratti iyyuu “akka hin bitamne.” Hundumtuu naaf iyyamameera__ hundumtuu garuu hin fayyadu. Hundumtuu naaf eyyamameera__ wanti kam iyyuu garuu naratti gooftaa hin ta’u” (1Qor. 6:12). Xuuxuun ganamuu bifa hin qabnen araada cimaa dha. booda irratti dubbisa wal fakkaataan nutty dubbata, “Dhagni keessan mana qulqulluummaa hafuura qulqullu isa isin keessa jiruu ta’uu isaa hin beektaniiree? Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan, mana qulquluummaa hafuuraa isaas erga taatani, isin kan ofii keessanii miti, Waaqayyoo gatiidhaan isin bitate, kanaaf guutummaan dhagna keessaniin waan inni ittiin gallateefamu hojjedhaa” (1Qor. 6:19-20). Xuuxuun shakki tokko malee fayyummaa keessaniif miidha kan fiduu dha. xuuxuun sombaa fi laphee akka miidhuu mirkaneefameera.
Xuuxuun akka “waan faayidaaqabuuti” ilaalamuun irra jirahi (1Qor. 6:12) xuuxuun fooniin Waaqayyoon ulfeessa jechuun hin danda’amaa (1Qor. 6:20)? Namni dhuunfaa tokko “ulfina Waaqayyoof” amanamummaan xuuxuun ni danda’amaa (1Qor. 10:31)? Isaan gaaffiiwwan sadan kanaaf deebiin isaanii inni deebissu“miti” dha. hundee kanaan, nun akka amanuuti xuuxuun cubbuu dha, kanaaf Yesus Kristosin duuka buutota ta’uu gochuun irra hin jiraatu.
Namoonni tokko tokkoo ilaalcha kana ni faalleessu, namoonni baay’ee nyaata fayya qabeessa hin taane nyaatu kan jedhu irratti xiyyafachuun innis akka araadaa ta’uu kan danda’uu fi qaamaaf miidhaa kan geessisu. Akka fakkeenyaatis namootni baay’een bifa hamaataan buna kan araadan ta’aniiru, ganamaan buna shiini tokko yoo hin arganne amma hin hojjeneeti. Kun dhugaa yoo ta’e ta’es, sun akkamitti xuuxuu sirrii godhaa? inni falmi keenya, kiristaanoonni diinummaa fi daangaa irra kan darbee fayya qabeessa kan hin taane nyaata akka dhabamsiisuuf. Eeyyee, Kiristaanoonni yeroo hundaa fakkeesituu dha ,cubbuu tokko yakkuudhaa fi cubbuu kan biraa dhoksuuf, ta’us garuu irra deebiin xuuxuu kanas Waaqayyoon ulfeessuuf hin godhan.
Falmii kan biraan ilaalcha xuuxuu kana mormuudhaaf, namoonni gaariin heedduun xuuxaan baay’een turaniiruu , akka lallabaa Biritaaniyaa C.H. Sipaarji’oon, beekamaan, tamboo tuutuun kan beekamu. Akka gahaanab, wal falmiin kun madaalli akka qabuu hin amannu. Siparji’oon xuuxuu isaan dogogora isaa ni amana. Karaa kan biraan inni nama gaarii fi ajaa’ibsiisaa sagalee Waaqayyoo lallabaa hin turree? Akkamitti! Sun gocha isaa fi amala isaa hundumaa Waaqayyoon kan hin gallateefanne isaan godha? Mitii!
Xuuxuu cubbuu jedhee kaa’uudhaan, amantootni hundumtuu hin fayyine jechuu miti. Dhugaan baay’een Yesus Kristoositti kan amannan jiru, kan xuuxan. Xuuxuun nama dhuunfaa fayyina irraa hin dhorku. Ta’uu yoo baatees inni nama dhuunfaa fayyina isaa akka dhabuu hin godhu. Xuuxuun cubbuu kan biroo irra dhiifama caaluu kan godhamu miti, nama kiristaana ta’es cubbuu isaas/ishees Waaqayyoof kan qalbi jijjiratu (1Yoha. 1:9). Yeroo wal fakkaataatti , sabritti kan amanu xuuxuun cubbuu dha, dhiifama cubbuu argachuutu irra jira, gaargarsa Waaqayyo kan dhiisu.